के सोच्दैछ सरकार? नागरिकले खान पाउंने अवस्था पनि गु'म्न लाग्यो, ल'कडा'उन खुल्ने कहिले ? - Filmy News Portal Of Nepal
विश्वभर फै’लिएको कोरोना मा’हामा’री रो’कथामका लागि सरकारले ल’कडा’उन जारी राखेको छ । चिनको वुहानबाट शुरु भएको कोरोना भा’ईरस यतिबेला हरेक देशको मुख्य चु’नौती बनेको छ । यसले नेपालमा पनि ८ जनाको ज्या”न लिईसकेको छ भने झण्डै २ हजार जान सं’क्रमित भएका छन् । तर, कोरोना रो’कथामका लागि लगाइएको ल’कडाउ’नले नागरिकको दैनिकी खो’सिएको छ ।
बिहान बेलुका के खाने भन्ने अवस्था श्रृजना हुने देखिएको छ । अझ यो भन्दा ठूलो त आर्थिक क्ष’ति भएको छ, आम मानिसमा । लकडाउन चैत ११ मा सुरु हुँदा मुलुकमा कोभिड–१९ संक्रमित २ जना थिए । लकडाउनको ७० औं दिन अर्थात् सोमबार यो संख्या १ हजार ८११ पुगेको छ । यहीबीचमा ८ जनाको सं’क्रम’णले मृ”त्यु भइसकेको छ ।
यसले ल’कडाउ’न कोभि–१९ सं’क्रमण रो’कथामको एकमात्र उपाय होइन भन्ने प्र’ष्ट्याएको छ । यो कुरा विज्ञहरुले अपनाउँदै आएपनि सरकारले ल’कडाउ’नलाई अपनाउँदै आएको छ । सबैतिरबाट द’वाव पर्न थालेपछि भने सरकारले ल’कडा’उनको ढाँचा बदल्ने तयारी थालेको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेश भट्टराईले अब विशेषज्ञहरुको रा’य लिएर मोडालिटी बन्ने र त्यसको आधारमा सरकार अघि बढ्ने बताए । अहिले शहर बजारमा बाक्लो सवारी देखिन्छ ।